Tilmaamaha Safarka Xalaasha ee Bordeaux - Makhaayadaha - Masaajiddada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Socdaalka Faransiiska Xalaal
Xaaladda Covid-19 ee Faransiiska
Bordeaux uqalma inuu si isku mid ah caan ugu noqdo biyaheeda quruxda badan ee heer sare ah iyo magaalada duugga ah, oo ah Liiska Dhaxalka Adduunka ee UNESCO.
Bordeaux iyo dhamaan gobolka Aquitaine waxay hoos imaanayeen xukunka Ingriiska 300 sano laga bilaabo 1154, markii Eleanor ee Aquitaine guursaday boqorka mustaqbalka Henry Henry. Taliyayaashii Ingiriisku waxay ku raaxaysteen cabitaanka khamriga Bordeaux, laakiin waxay ku raaxaysteen faa'iidooyinka xitaa inbadan - ganacsiga Bordeaux wuxuu ahaa isha ugu weyn ee dakhliga. Khamriga intiisa badani wuxuu ka yimid gobolka Graves oo kaliya ka soo jeeda magaalada, tanina waxay ahayd mid cad oo qotodheer oo loo yaqaan xijaab, ilaa maanta la soo saaray. Ingiriisku wuxuu u yimid inuu ugu yeero Bordeaux khamri kasta oo casaan ah "claret".
Sannadkii 1453-kii ayaa Faransiisku lawareegay Aquitaine oo wuxuu jaray sahaydii Ingiriiska, oo joojisay cabitaanka khamriga 500 ee sano ee soo socota, una jeesatay biirka iyo jayga. Tani waxay sababtay hoos u dhac ku yimid Bordeaux, oo kaliya ka soo noolaaday qarnigii 16aad iyada oo loo marayo ganacsiga trans-Atlantic. Magaaladu waxay markaas ku barwaaqowday illaa qarnigii 18aad, markii inta badan dhismaheeda wanaagsan la dhisay, waxayna iyadu tusaale u noqotay dib-u-habeynta Haussmann ee qarnigii 19-aad ee Paris. Bordeaux sidoo kale waxay u timid inay madoobaato dekedaha kale ee Faransiiska ee Atlantic sida Bayonne iyo La Rochelle. Hantida inteeda badan waxay ku saleysneyd ka ganacsiga addoomada saddex geesoodka ah: sonkorta, rumka iyo wax soo saarka dalagyada kale waxaa loo diray Faransiiska oo laga keenay Ameerika iyo Kariibiyaanka, Faransiiska ayaa alaabooyin warshadeed u soo raray Afrika, halkaasoo addoommada loo diray galbeedka si ay uga shaqeeyaan beerahaas.
Bordeaux waxaa ku dhacay kharash bini'aadam markii qalalaasihii dambe dhacay: Kacaankii Faransiiska, dagaalladii Napoleonic, iyo Dagaalkii Koowaad iyo Labaad ee Adduunka. Laakiin burburka dhismayaashu wuu yaraa in la dayactiro, halkii uu u baahnaan lahaa dib-u-dhis ballaaran. Waynayntii qarnigii 18-aad ayaa sidaas lagu ilaaliyay. Waxay ka caawisay in nuuradda iyo dhulka hoostiisa ee dhagaxa ah aysan qaadanaynin culeyska dhismayaasha dhaadheer. Amaahdu sidoo kale waxaa iska leh Duqa magaalada Bordeaux (iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Faransiiska) Alain Juppé, inuu ka ilaaliyo khalkhal gelinta casriga ah iyadoo dib loo soo nooleynayo magaalada gudihiisa, iyadoo la marayo goobo lugeynaya iyo nidaam gaadiid oo dib loo habeeyay.
Bartilmaameedka Bordeaux waa xeebta webiga iyo dekeddii hore, halkaas oo dhismayaal wanaagsan oo qarnigii 18aad ay ku fidsan yihiin 3 km oo ku taal daanta galbeed ee Garonne, laga bilaabo Quinconces ee waqooyiga ilaa St Croix ee koonfurta. Degmooyinka qadiimiga ah ee St Pierre iyo St Michel waxay ku fidaa gudaha gudaha ilaa 1 km. Inta badan indhaha magaaladu waxay ku yaalaan aaggan. Saldhigga tareenku waa koonfur, oo ku yaal cagta Cours de la Marne. Dhanka woqooyi, Quai des Chartrons ayaa dib -u -dhis loogu sameeyay “Magaalada Khamriga”, waxayna leedahay madxafka khamriga. Xarunta ugu weyn ee jaamacaddu waxay ku taal agagaarka Talence, 10 km koonfur -galbeed. Degmooyinka bariga webiga waa kuwo casri ah: sababaha ugu waaweyn ee looga gudbo ayaa ah aragtida gadaal u jeeda xagga qorraxda subax, iyo booqashada Jardiinooyinka Botanic.
U duuli Bordeaux
Gegada Diyaaradaha ee Bordeaux-Mérignac (15 km (9.3 mi) galbeedka Xarunta Magaalada). Duulimaadyada gudaha ayaa ku xira garoonka Paris Orly Airport & Paris Charles de Gaulle Airport, Lyon, Lille, Marseille, Montpelier, Nice iyo Strasbourg. Goobaha caalamiga ah waxaa ka mid ah Madaarka Schiphol, Barcelona El Prat Airport, Basel, Berlin, Bristol, Brussels, Budapest, Casablanca, Dublin, Dusseldorf, Geneva, Lisbon, London (Gatwick Airport, Luton & London Stansted Airport), Madrid – Barajas Airport, Milan, Prague, Rome, Tunis iyo Venice.
Waxaa jira hirgelinno laba-iyo-bar terminals, dhinac ah. Air France waxay isticmaashaa Terminal B, shirkadaha duulimaadyada miisaaniyada waxay isticmaalaan Terminal “Billi” oo ah kala badh: waa kudarid B. Duulimaadyada kale waxay isticmaalaan A iyo B - labadan ayaa ah terminaal waasac oo casri ah oo leh tas-hiilaadka caadiga ah ee dhulka & hawada. “Billi” waxay leedahay meel wax lagu iibsado oo cariiri ah, laakiin dukaamada & maqaayadaha marka aad hawada gasho. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Baska Lianes 1+ wuxuu ka socdaa badhtamaha magaalada laga bilaabo Terminal B Arrivals 10 daqiiqo kasta, iyada oo loo sii maro Xarunta Magaalada Mérignac iyo Xarunta Magaalada Bordeaux ilaa xarunta tareenka ee Bordeaux St-Jean. Waa qiimo jaban oo ah 1.60 5, ku bixi baska darawalkuna wuxuu siiyaa isbeddel sabab macquul ah. Safarka dhammaystiran guud ahaan wuxuu qaataa saacad. Basku wuxuu soconayaa XNUMX -ta subaxnimo ilaa saqda dhexe habeenka wuxuuna ku xiraa nidaamka taraamka ee Mérignac.
Baska xawliga ku socda ee "Keolis" wuxuu socdaa 30-60 daqiiqo kasta oo aan joogsi lahayn inta udhaxeysa garoonka diyaaradaha iyo istaanka weyn ee tareenka. Kharashku waa € 8 (tanaasulaad € 7) adigana waxaad ku bixin kartaa baska. Baska guud ahaan wuxuu socdaa inta udhaxeysa 08:00 ilaa 20:00. Markaa inkasta oo ay dhakhso badan tahay, waxaad sugi kartaa waqti dheer sugitaanka baska xiga, haddii aad runti ku jirto xawaare aad u daran waxaad u baahan tahay taksi.
Tareen ku raac Bordeaux
Saldhiga tareenka ugu weyn Gare Saint-Jean wuxuu ku yaal meel qiyaastii afar km koonfur-bari ka xigta Xarunta Magaalada. Albaabka ugu weyn wuxuu u jeedaa xagga galbeed xagga Cours de la Marne; basaska, taraamyada iyo tagaasida ayaa ka baxa barxadda hore. Qaad Tram C si aad u hesho badhtamaha magaalada haddii aad u socoto dhinaca waqooyi, ama bas haddii aad u socoto aagga dhexe ee agagaarka Goobta de la Victoire.
Hoolka tikidhada ugu weyn wuxuu ku yaal dhamaadka woqooyi dhismaha saldhiga, hoostiisa khariidada weyn ee shabakada iyo saqafka weyn ee foorarka. Inta badan mashiinnada tikidhada is-adeegga ayaa sidoo kale halkan jooga, oo lagu daray (si waxtar leh) biyaano. Waxaa jira xulasho ah meelo cunno dhakhso ah hareeraha hoolka. Dabaqa hoose waa suuq laga dukaameysto iyo marinka dhulka hoostiisa laga soo galo ee laga helo.
Tareenka TGV ayaa xawaare saacad kasta uga yimaada Paris Montparnasse, iyadoo kan ugu dhaqsiyaha badan uu qaadanayo wax ka badan labo saacadood. Labo tareen maalintiiba waxay toos uga baxaan garoonka diyaaradaha Paris CDG, in kasta oo waqtiga safarka ee ku saabsan 3 saacadood 30 uusan ka dhakhso badnayn beddelka Montparnasse ee u dhexeeya TGV iyo RER. TGV-yada kale ee ka imanaya Paris waxay sii wadaan koonfurta dhanka xeebta illaa Bayonne, Biarritz, iyo soohdinta Isbaanishka ee Hendaye. Tareenada gobolka (ka raqiisan) TER sidoo kale waxay maraan wadadan koonfurta, iyo sidoo kale waqooyiga ilaa La Rochelle iyo gudaha ilaa Périgueux iyo Clermont-Ferrand. Tareenada Fast Intercité waxay ku xirmaan Toulouse, Marseille, Montpellier iyo Nice.
Ugu safro Bordeaux gaari ahaan
Laga soo bilaabo woqooyiga (Paris, Tours, Poitier) raac A10. Laga soo bilaabo Toulouse ilaa SW qaado A62, Bayonne A63 qaado.
Marinka A630 / N230 ayaa ku wareegsan magaalada. Badanaa waa saxmad iyo tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah.
Bordeaux waxay leedahay adeegyo toos ah Flixbus ilaa Paris Bercy Seine (7-8 saacadood, 4 maalintii), Toulouse (3 saacadood, 6 maalin kasta), Bayonne (2-3 saacadood, 3 maalin kasta), Lyon (7-8 saacadood, 2 maalintii), Nice (hal maalin maalintii, 12 saacadood) iyo Nantes (4-5 saacadood, 4 maalintii). Waxay sidoo kale toos ugu socdaan laakiin maalin kasta uma socdaan Barcelona, ​​Madrid iyo Lisbon. U beddel Paris ama Lyon jidadka kale ee caalamiga ah.
Eurolines waxay si toos ah ugu socdaan Frankfurt (16 saacadood, 3 asbuucii), Stuttgart (16 saacadood, laba jeer usbuucii), Warsaw (35 saacadood, laba jeer usbuucii) iyo Przemysl oo ku taal xadka Ukraine (40 saacadood, laba jeer usbuucii).
Boosteejada baska ee Flix iyo Eurolines waxay ku taal Quai de Paludate oo woqooyiga ka xigta saldhigga tareenka, ka soo horjeedka lambarka 18aad, halkaas oo waddooyinka tareenku maraan intaan wabiga laga tallaabin. Jadwalka Eurolines wuxuu muujinayaa tan sida rue des Terres de Borde, oo ah waddada barbar dhigta jidadka tareenka ka xiga bariga saldhigga.
European Bike Express waxay baaskiil ka raacdaa baaskiiladooda UK iyo meelo kala duwan oo Yurub ah, oo ay ku jiraan Bordeaux marinadooda "Atlantic A & B". Waxay soconayaan labadii toddobaadba mar xagaaga waxaana hubaal ah in si adag loo ballansan doono toddobaadyada ku dhow le Tour, il Giro iyo la Vuelta. Soo-qaadista & soo-dejinta Bordeaux waxay ku taal Lormont, 10 km waqooyi ka xigta Xarunta ka baxsan A630-ring-road, oo ku taal Buundada weyn ee Golden-Gate-styled Bridge.
Tramway ee Bordeaux
Soco: in kasta oo Bordeaux ay tahay magaalo weyn, indhaha xiisaha ayaa si aad ah isugu dhow Xarunta hore, badankeedana waa la lugaynayaa. Baabuurka halkan ayaa naafo ah.
Dhammaan macluumaadka gaadiidka dadweynaha waxaa lagu dhejiyaa websaydhka TBC. Khariidadaha iyo waqtiyada sidoo kale waxaa si fudud looga geli karaa Khariidadaha Google, kaliya dooro dariiqa "Gaadiidka dadweynaha" marka aad heleyso tilmaamaha.
Wadooyinka basaska magaalada waxay maraan afarta xarun ee waaweyn:
Saldhigga tareenka ee ugu weyn, Gare Saint-Jean, wuxuu leeyahay basas u socda Xarunta Magaalada, jaamacadda, iyo dhanka woqooyi.
Place de la Victoire waxay leedahay basas u socda Xarunta, saldhigga tareenka, Jaamacadda, iyo waqooyiga iyo koonfur-galbeed ee magaalada.
Goobta Gambetta waxay leedahay basas aada magaalada Victoire, xarunta tareenka, iyo galbeedka, waqooyi-galbeed, iyo dhinacyada woqooyi.
Quinconces waa is weydaarsiga ugu weyn ee taraamyada iyo basaska.
Sidoo kale basaska caadiga ah, waxaa jira bas yar oo koronto ku shaqeeya, oo la yiraahdo la navette du Center-ville, oo ka dhex shaqeeya meelaha lugeynaya. Ma jiro boosteejooyin basaska loo istaago midkan, kaliya gacanta u qaad darawalka si laguu daayo, una sheeg darawalka markii aad rabto inaad ka degto.
Tikidhada hal mar ah (1.60 4) waxaa laga iibsan karaa wadaha baska. Haddii ay u badan tahay inaad sameyso 5 ama in ka badan oo safar ah, ka iibso xirmo ah 10/6.70 tikidhada € 12.70 / € 4.60 ama kaarka maalinlaha ah / toddobaadlaha ah ee € 13.40 / € 2018 ee Espace TBC (Feb XNUMX). Waxay ku leeyihiin dukaanno ku yaal Gare Saint-Jean, Place Gambetta iyo Quinconces. Sidoo kale waxaad ka iibsan kartaa mashiinada otomaatiga ah ee joogsiga tareenka, mashiinada oo dhami way aqbali doonaan shilimaadka qaarna waxay aqbali doonaan kaararka debit / amaahda. Dhammaan safarradu waxay ku fiican yihiin hal saac oo wareejin aan xadidnayn ah, oo ay ku jiraan bas iyo taraam - waa inaad ansaxisaa tigidhkaaga markasta oo aad beddesho. Isku day inaad ka fogaato safarka inta lagu jiro saacadaha degdegga ah.
Waxaa jira saddex waddo oo taraam ah (A, B & C) oo magaalada ka gudbeysa. Tigidhada iyo qiimayaashu waa la mid yihiin baska, isla markaana xawilaad aan xadidnayn hal saac gudahood. Astaamaha lagu garto tramway-ka ayaa ah in gudaha magaalada gudaheeda, aysan lahayn fiilooyin dusha sare ah maadaama ay isticmaasho koronto heer-sare ah.
Wabiga-baska BAT³ ama Batcub waxay ka socotaa Stalingrad / Quai de Queyries oo ku taal daanta bari, woqooyi dhanka galbeed ilaa Quinconces, Les Hangars iyo Cite du Vins, ugu dambayntii waxay u socotaa Lormont (bangiga bariga, Pont Aquitaine hoostiisa.) Ferries waxay socdaan 45 daqiiqo kasta, 7 maalmood usbuucii, iyadoo wadata dhammaystirka ay qaadaneyso 40 daqiiqo. Waxay qayb ka yihiin nidaamka gaadiidka magaalada ee TBM sidaa darteed tikidhada iyo canshuuraha waxay la mid yihiin baska iyo taraamka. Baaskiilado ayaa la qaadaa.
Ugu safro baaskiil magaalada Bordeaux
V3 waxay ka shaqeysaa nidaamka wadaagga baaskiilka gudaha Bordeaux, sida ay ku sameeyaan magaalooyin kale oo Yurub ah. Waxaad u baahan doontaa inaad iska diiwaangeliso khadka tooska ah oo aad dhigato deposit 200. Kadib dooro kiro hal maalin ah (€ 1.60), 7 maalmood (€ 7), hal bil (€ 10) ama ka badan. Isticmaal kasta oo baaskiil waa bilaash illaa 30 daqiiqo, intaa kadib waa it's 2 saacaddii (Feb 2018). Waxaa jira ilaa 175 goobood oo lagu soo raro gudaha iyo hareeraha magaalada, iyo khariidada isdhexgalka ee V3 waxay muujineysaa helitaanka waqtiga-dhabta ah.
Waxyaabaha muhiimka ah ee socdaalka socodka ee Bordeaux waxaa ka mid ah:
Les Quais oo ku teedsan daanta galbeed: oo loo yaqaan "Port of the Moon" oo loogu talagalay xaaqida bilaha webiga
Quinconces, oo ah laba jibbaaran caleenta ah (iyo xarunta gaadiidka), oo leh Girondins Memorial qurux badan kuwa halkan lagu soo tababaray, iyo Jardiinooyinka Dadweynaha ee ku dhow
Porte de Bourgogne, wadada dheer ee loo maro Koorsooyinka Victor Hugo
Mirroir d'Eau (Muraayada Biyaha), oo ka soo horjeedda wadada ka timaada Place de la Bourse: waxay ku beddeleysaa dusha biyaha dhalaalaya oo leh ceeryaamo
Place de la Victoire, oo leh waddo isku mid ah, oo ku taal cagtu rue St-Catherine ee xarunta weyn ee laga dukaameysto
Dhig Gambetta, oo leh guryo waaweyn
laga xusi karaa kaniisadaha waa Cathédrale St-André (inta badan qarnigii 13-14aad, oo leh daar gambaleel gooni ah "Pey-Berland" € 5.50 si loo fuulo); Basilique Saint-Michel (sidoo kale leh munaarad gooni ah, maalin walba furan); iyo kaniisada St Croix (oo uxiran soo celinta).
Markaa ka baxso magaalada Jardin Botanique (Beerta Beerta), oo ku taal daanta bari ee Quai des Queyries. Furan Apr-Oct 08: 00-20: 00, Nov-Mar 08: 00-18: 00, gelitaan bilaash ah.
Musée D'Art Contemporain (CAPC), 7, rue Ferrère (waqooyiga Quinconces, off Quai des Chartrons),. Tu-Su 11: 00-18: 00 (W ilaa 20:00), wuu xidhan yahay Isniinta. Dhismo xusid mudan, Entrepôt Lainé waa bakhaar weyn oo 19aad oo loogu talagalay soo dejinta cuntada. Inta badan booska waxaa lagu wareejiyaa bandhigyada beddelidda iyo rakibidda (iyo qiimaha tanaasulku wuxuu quseeyaa markastoo aysan jirin). Bandhigga ururinta joogtada ah ayaa sidoo kale meerto ah: nidaamka hadda jira, oo loo yaqaan [sic], wuxuu taaganyahay illaa dhammaadka Oktoobar 2019. Kafeega dusha sare leh. € 7, tanaasul € 4, oo bilaash ah Axadda koowaad ee bisha. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Musée D'Aquitaine, 20 Koorsooyinka Pasteur ,. Tu-Su 11: 00-18: 00. Matxaf aad u qurux badan oo soo bandhiga taalloyinkii Gallo-Roman iyo waxyaallaha taariikhiga ah ee soo jiray 25,000 sano. € 5, tanaasul € 3. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Musée du Vin et du Négoce, Cellier des Chartrons 41 Rue Borie,. Maalin kasta 10: 00-18: 00. Taariikhda, qalab duug ah & tikniyoolajiyad cusub laga soo bilaabo 2000 oo sano oo wax soo saar khamri ah laga helo gobolka. Lacagta gelitaanka waxaa ku jira dhadhanka laba khamri. € 10, tanaasul € 5. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Musée des Beaux-Arts (Matxafka Farshaxanka Farshaxanka), 20 cours d'Albret (dhinaca galbeed ee Hotel de Ville, laakiin waxaad u baahan tahay inaad ka soo gasho c. D'Albret),. WM 11: 00-18: 00. Socod iftiiminaya oo maraya taariikhda fanka reer galbeedka. Laba garab oo ka dambeeya Hotel de Ville. Ka bilow garabka koonfureed ee ka socda Renaissance iyada oo loo marayo masters-ka Flemish illaa dhammaadka qarnigii 18aad. Garabka woqooyi wuxuu ku sii socdaa dhaqdhaqaaqyada farshaxanka weyn ee 19aad & horraantii qarnigii 20aad. Sidoo kale u fiirso bandhigyada ku jira lifaaqa, Galerie des Beaux-Arts, ee ku yaal Place du Colonel Raynal. Ururinta € 4, tanaasullada € 2; oo leh bandhigyo € 6.50, € 3.50. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Waxa laga qabanayo Bordeaux
Daawo kubbada cagta (kubada cagta) at FC Girondins. Waxay ka ciyaaraan Ligue 1, duulimaadka ugu sareeya ee kubada cagta Faransiiska, waxayna inta badan uqalmaan tartamada Yurub. Ciyaaraha ka dhanka ah kooxaha waa weyn (sida Marseille, PSG & Lyon) badanaa waa la iibiyaa, markaa tikidhada horay uga sii iibso bogga kooxda. Ciyaaraha kale waa inaadan dhib ku qabin inaad wax iibsato maalinta. Girondins wuxuu ku ciyaaray tan iyo 2015 garoonka Nouveau Stade (ama "Matmut Atlantique"; wuxuu qaadi karaa 42,115), oo 20 km galbeed ka xigta Bordeaux oo ku taal xaafada Le Haillan Halkaas ku tag Tram C ilaa Parc des Exposition oo ku soco 400 m, ama Tram B ilaa Brandenburg ka dib raac baska baska, ama baska 7 ama 32 ee ka socda Les Aubiers.
Daawo midowga rugby-ga ee Union Bordeaux Bègles, oo ka ciyaara 14 -ka Sare, duulimaadka ugu sarreeya rugby -ga Faransiiska. Waxaa la aasaasay 2006 markii la isku daray Stade Bordelais iyo Bègles. Waxay caadi ahaan ku ciyaaraan Stade Chaban-Delmas, galbeedka Bartamaha Magaalada oo ku yaal jidka-giraanta gudaha. Garoonkii hore ee Bègles (Andre Moga) hadda waa goob tababar.
Daawo xeegada barafka at Boxers de Bordeaux, oo ka ciyaara Ligue Magnus, oo ah horyaal xirfad sare leh oo Faransiis ah. Waxay ku ciyaaraan garoonka barafka ee Meriadeck.
Naadiga Cricket-ka ee Bordeaux wuxuu ku ciyaaraa Château Giscours oo ku yaal Labarde, 25 km waqooyiga magaalada; xaadiritaanka waa lacag la’aan.
Baadh magaalada taayirro maadaama Bordeaux ay tahay magaalo ku fiican rooka-barafka (ama rolaalka-blading) iyo “isboortiga” kale.
Bordeaux waa magaalo ku fiican barashada- in yar laga barto dhaqanka Faransiiska, tixgeli booqashada shineemooyinka sida Utopia ama aado maktabada magaalada ee Meriadeck.
Jaamacadda Bordeaux, oo dhawr kiilomitir koonfur ka xigta magaalada, waxay bixisaa koorsooyin kala duwan oo fara badan, laga bilaabo sayniska ilaa cilmiga aadanaha, laga bilaabo fasallada bilowga ah ilaa cilmi-baaris heer sare ah. Sheybaarada ayaa ka mid ah kuwa ugu fiican Faransiiska. Waa suurtagal in koorsooyinka Faransiiska lagu qaato halkaas xagaaga, ardayda Erasmus. DEFLE (Waaxda daraasadda Faransiiska oo ah luqad shisheeye) waxay kuxirantahay Université Michel de Montaigne - Bordeaux III. Waxay ku bixisaa koorsooyin simistar iyo fasaxyo Faransiis ah ardayda ajnabiga ah.
Wax ka iibsiga Bordeaux
Bordeaux waxay hantideeda ka dhigtay ganacsi, nidaamka dhaqaale ee maxalliga ahna wuxuu aad ugu tiirsan yahay dukaamada iyo hoolalka ganacsiga. Xarunta dadka lugeynaya waxaa ka buuxa dukaamo noocyo kala duwan leh, laga bilaabo dharka ilaa farshaxanka, farsamada gacanta, cuntada iyo khamriga iwm .Haddii aad raadineyso alaab qaali ah, u dhaqaaq fagaaraha Gambetta iyo hareeraheeda.
Soo iibso muusig maxalli ah - kooxaha muusikada ee Bordeaux ayaa soo kordhaya! Fiiri Kap Bambino, oo ah duub muusiko elektaroonik ah oo ay sameysay fannaanad Caroline Martial iyo saaxiibkeed garaacista garaacista ah ee Orion Bouvier.
Dharku waa ka qaalisan yahay kan Paris, markaa xidho kabo raaxo leh oo waxaad aaddaa Rue Sainte Catherine, oo ah meesha ugu lugo dheer dadka lugaynaya Yurub iyo meesha ugu fiican ee wax laga iibsado. Qaar ka mid ah dharka labaad ee jaban iyo dharka guridda, ka hubi dukaan la yiraahdo KiloChic on 40 Cours de la Somme. Waxa kale oo jira dhawr dukaamo gacan labaad ah oo ku yaal magaalada 'AMOS' oo ku yaal magaalada kuwaas oo bixiya xulasho wanaagsan oo ah waxyaabo gacan labaad iyo kuwo guryo ah.
Haddaad khamri iibsato, ku samee magaalada (waajibaadka mushaharka) si aad u gasho shandado la hubiyey; garoonku ma ahan meel wanaagsan qiimayaasha awgood, xulasho xaddidan iyo xaddidaad lagu qaado. Rasiidhada ha ahaato kuwo gacanta ku haya, waddankaaga ayaa laga yaabaa inuu leeyahay gunno lacageed oo weyn oo loogu talagalay khamriga waajibaadka la bixiyo.
Halkee laga joogaa Bordeaux
Hoteellada dalxiis ee ugu badan waxay ku dhow yihiin saldhigga tareenka (taasi waa, ku dhow Quais). Waxaa jira hudheelo qaali ah oo ku dhow Gambetta square iyo Quinconces square, kuwaas oo runtii fiican laakiin qaali ah.
Auberge de la Jeunesse (Bordeaux Youth hostel), 22 koorsooyin Barbey (300 m galbeed xarunta tareenka),. Hostel kaliya ee Bordeaux wuxuu leeyahay xarumo wanaagsan. Quraacda iyo gogosha ayaa lagu daray. Waxaa jira meel laga xirto inta u dhexeysa 02:00 ilaa 05:00 sidaa darteed u qorshee habeenkiina sida ugu habboon. € 23 qofkiiba / habeenkii. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Ibis Miisaaniyadda Bordeaux Center Gare St Jean, 60 Rue Eugene Leroy ,. Ka soo horjeedka saldhigga weyn ee tareenka, qolalka waa yar yihiin laakiin wey iskiis u deggan yihiin. Meel wanaagsan oo loogu talagalay gaadiidka, 3 km u jirta magaalada hoose. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Barxad Buluug ah oo ku taal Bordeaux (C'est une maison bleue), 70, rue de Ségur ,. Qolalka martida ee quruxda badan qarnigii 19aad “échoppe” oo leh beer. Waxay ku taallaa khadka Tramway B ee u socda Xarunta taariikhiga ah ee magaalada. Sidoo kale toos uga tag saldhigga tareenka baska N ° 9. Baabuur dhigasho fudud oo bilaash ah. U dhow Jaamacadaha iyo Victoire. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Hoteelka Galbeedka ugu Fiican Bordeaux (hore Tulip Inn), 4 rue Martignac,. Huteel qurux badan oo qarnigii 18-aad, oo leh agab fiican oo hudheelka ku yaal oo dhan, oo leh mahogany iyo alaabta beech. Meel u dhow Tiyaatarka Weyn iyo saddexagalka d'Or. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Hoteelka de Normandie, 7-9, cours du 30 Juillet ,. In kasta oo qolalku ay yihiin kuwo qunyar-socod ah, goobta iyo aragtiyada meesha loo yaqaan 'des des Quinconces' ee qolalka ka soo jeeda waa kuwo qurux badan. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Intercontinental Grand Hotel (horey Regent), 2-5 Place de la Comedie (kasoo horjeedka Opera / Tiyaatarka),. Hoteel shan xiddigle ah oo ku dhow maqaayadaha la amaano. Qolalka si aan wanaagsaneyn ayaa loo qurxiyey, oo leh musqulo marmar ah. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Novotel Bordeaux Lac (hore Sofitel), Avenue Jean-Gabriel Domergue. On bangiyada harada Bordeaux, oo u dhow Xarunta Shirarka. Barkadda dabaasha ee gaarka loo leeyahay. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Burdigala, 115 rue Georges-Bonnac ,. Muujinta xarrago Yurubiya, Burdigala waxay soo jiidataa macaamiil caalami ah oo ka mahadceliya shaqaalaheeda luuqadaha badan iyo qolal waasac ah oo lagu buuxiyo musqulaha marmar. Hoteelka ayaa sidoo kale martigeliya joogitaanada muddada dheer. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Hotel Mercure Bordeaux Cite Xarunta Mondiale Ville (hore Libertel), 18 parvis des Chartons (Quais waxaa ku leh madxafka farshaxanka ee CAPC),. In ka badan oo kaliya hudheel raaxo leh, Mercure ayaa sidoo kale leh bar khamri ah oo soo bandhigaya 200 khamri oo kala duwan oo adduunka oo dhan ah. Qolalka waasac ah dhammaantood waa la dayactiray waxayna muujiyeen xarrago khiyaano badan. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Bordeaux waxaa daboolaya saddexda shirkadood ee waaweyn ee isgaarsiinta ee Faransiiska: France Telecom (Orange), Bouygues, iyo SFR. Haddii aad haysatid taleefanka gacanta ee GSM oo leh rukumo caalami ah, waa inaad ka wici kartaa meel kasta oo magaalada ka mid ah. Sidoo kale waa suurta gal in la helo qolal taakulo ah, laakiin qaarkood ayaa dhowaan laga saaray adeegooda oo yaraaday.
Marka laga hadlayo marin-u-helka internet-ka, waxaa jira dad yar oo internet-ka ku leh bartamaha, oo aan qaali ahayn (laga bilaabo € 2 ilaa 4 saacaddiiba).
Makhaayadaha badankood sidoo kale waxay bixiyaan Wi-Fi bilaash ah.
Nabdoonow oo iska ilaali khiyaanooyinka Bordeaux
Bordeaux maahan magaalo leh dambi aad u sareeya. Haddii aad ixtiraamto qawaaniinta fudud, waa inaadan wax dhibaato ah qabin.
Ka taxaddar jeebadaha, inta badan basaska badan iyo waddooyinka lugeynaya. Ha uga tagin wax shandado ah aragga maxaa yeelay way baaba'ayaan. Haddii aad baska ku qaadanayso boorso, way ka wanaagsan tahay inaad cagahaaga dhex dhigto intii aad dhabarkaaga ku hayn lahayd.
Ha aadin naadiyada ama baararka kaligood habeenkii. Haddii aad la kulmeyso asxaabtaada, ku kulan banaanka baarka / naadiga. Way fududahay inaad gudaha gasho markaad xirmo tahay.
Sharci kale oo guud, ha aqbalin cabbitaannada ay bixiyaan dad aadan aqoon, waayo dadka qaar ayaa laga yaabaa inay ku daroodaan oo ay kugu xumeeyaan ka dib. Waxaa jiray kiisas dhowr ah oo laga soo sheegay Bordeaux. Cabitaannada toos uga qaado baarka ama kabalyeeriyaha.
Qunsuliyadaha ku yaal Bordeaux
Kaniisadda Saint Emilion
Waxaa jira waxyaabo badan oo xiiso leh oo lagu arko meel u dhow Bordeaux.
North: Gobolka Medoc, halkaas oo laga soo saaro qaar ka mid ah khamriga caanka ah ee Bordeaux. Kobaca ugu horreeya ee Château Lafite Rothschild, Chateau Latour, Château Margaux iyo Chateau Mouton Rothschild dhammaantood waxay ku yaalliin Medoc. Haddii aad qorsheyneyso booqasho aad ku tageyso chateau, maskaxda ku hay kuwan soo socda: (1) horay u soo wac oo booska sii dhig; (2) Chateau Latour guud ahaan wuxuu qaataa oo keliya aqbalayaasha culus iyo xirfadleyda.
West: Dhinaca galbeed, waxaad ku dambayn doontaa Badweynta Atlantik, in ka badan 250 kiiloomitir oo ah xeeb ciid dahab ah oo ay weheliso badwayn geedo geedo aan la shaacin; waxaa jira magaalooyin fara badan oo aad u qurux badan oo u dhow badda, oo ay ku jiraan Arcachon, oo ah magaalo dhinaca badda ku taal, oo lagu xusay wax soo saarkeeda alayda. Tareen waad ka raaci kartaa Gare de Saint Jean oo ku yaal Bordeaux ilaa Arcachon qiyaastii € 7, tareenku wuxuu qaadanayaa inta u dhexeysa 40 iyo 50 daqiiqo. Harada 'Hourtins' Lake, oo ah harada ugu weyn ee biyaha macaan ee Faransiiska, ayaa ku yaal halkaas. Xilliga xagaaga, waa janno ay ku dabbaasho ama ku kaxeyso baaskiil geedaha geedka geedka aaggaas. Meel u dhow Arcachon waa carada ugu weyn ee Yurub-aad u xiiso badan, gaar ahaan markaad la safreyso carruurta yaryar, ama ilmahaaga yar ee gudaha ah.
East: Halkaan waxaad kaheleysaa Saint-ilmilion, oo caan ah AOC (cf Saint-Émilion AOC) oo ku hareereysan tuulada UNESCO Heritage isla magacaas (cf UNESCO Liiska Dhaxalka Adduunka). Halkan, sheekada ugu caansan waa Château Ausone iyo Château Cheval Blanc. Meel u dhow, Pomerol AOC, waxaa jiifa Château Petrus. Intaa waxaa dheer, Entre-deux-Mers oo u dhexeeya wabiga Garonne iyo webiga Dordogne wuxuu leeyahay noocyo badan oo duug ah iyo khamriyo soo saara Bordeaux Superieur khamri.
South: Gobolka Qabriyada, oo ay ku jiraan qaar ka mid ah beeraha ugu da'da weyn. Laba guri oo caan ah waa Château Haut-Brion iyo Château La Mission Haut-Brion. Koonfur-bari waxaa jiifa Sauternes, oo soo saarta mid ka mid ah khamriga macmacaanka ugu caansan adduunka, Château d'Yquem. Aaggan ayaa ah midka ugu xiisaha badan dalxiiska taariikhiga ah, iyadoo magaalooyin badan oo qurux badan iyo taallooyin taariikhi ah ay u furan yihiin dadweynaha. Magaalooyinka: Bazas, Saint Macaire, Uzeste, Cadillac. Qalcadaha: Chateau de Roquetaillade, Villandraut, Malle, Fargues, Cazeneuve. Qiyaastii 10 km koonfur-galbeed Bordeaux, xaafadda Pessac waa Quartiers Modernes Frugès, oo ah horumarin guriyeyn 1920s ah oo uu sameeyay naqshadeeyaha Le Corbusier kaas oo kuqoran goobta dhaxalka aduunka.
Ku soo gaadho tareennada gobolka ee tareennada (TER), ama khadadka basaska ee magaalada u dhexeeya (kuwaas oo inta badan taga meelaha aan tareenadu tagin). Baabuur ahaan, aagaggaan oo dhan wax ka yar saacad ayey uga jiraan Bordeaux.
Gobolka oo dhan waxaa ku daboolan baaskiil si habeysan loo abaabulay ama jidad socod oo kuu ogolaanaya inaad baadho baadiyaha.
Baadhitaano Goobo Badan oo Xalaal Faransiis ah
Hagaha Socdaalka Marseille Xalaal
Hagaha Socdaalka Xalaasha ee Strasbourg
Tilmaamaha Safarka Xalaasha ah
Tilmaamaha Safarka ee Lyon Xalaal
Hagaha Socdaalka Xalaal ee Paris
Hoteelka Adagio Access Bordeaux Rodesse
Dhamaan Suites Appart Hotel Bordeaux Lac
Dhamaan Suites Appart Hotel Bordeaux Merignac
Dhamaan Suites Arcachon Le Teich
Hoteelka Galbeedka Bordeaux Aeroport
Galbeedka Galbeedka Bordeaux Bayonne Etche-Ona
Hoteelka Galbeedka ugu Fiican Francais Bordeaux
Hoteelka Galbeed ee ugu Fiican Royal Saint Jean Bordeaux
Hoteelka Chateau Camiac Bordeaux
Xarunta Citadines Meriadeck Bordeaux
Xarunta Degenaanshaha Magaalada Bordeaux
Raaxada Hotel Bordeaux Merignac
Raaxo Huteel Bordeaux Pessac
Hotelka weyn ee De Bordeaux & Spa
Noocyada Ibis Bordeaux Gare Saint Jean
La Reserve Au Pavillon Du Chateau Raba Talent Hotel
Hotelka Le Boutique ee Bordeaux
Huteelka Mercure Bordeaux Center
Hoteelka Mercure Bordeaux Chateau Chartrons
Mercure Bordeaux Cite Mondiale Center De Congres Hotel
Hoteelka Novotel Bordeaux Aeroport
Novotel Center Meriadeck Hotel Bordeaux
Hoteelka Novotel Bordeaux Le Lac
Park & ​​Suites Village Bordeaux Saint Jean D'Illac
Tayada Hoteelka Tayada St. Catherine
Tayada Suites Hotel Bordeaux Aeroport
Residhotel Galerie Tatry Residence Deg Deg Bordeaux
Xiddigaha Hotel Bordeaux Gare
Xidigaha Hotel Bordeaux Sud
Suugaanta Teneo Bordeaux
eHalal Safarka Mart > Socdaalka Faransiiska Xalaal > Tilmaamaha Safarka ee Bordeaux Xalaal
Tilmaamaha Safarka Al Ain Xalaal